Sababaha Dhimashada Malqabeenada Iyo Dadka Caanka Ah! - Xogside
Home MAQAALO Sababaha Dhimashada Malqabeenada Iyo Dadka Caanka Ah!
Weligaa ma is weydiisay sababta ay dadku isu dilaan ee ay nafta isaga jaraan? waa maxay sababta uu qof maalqabeen ama caan ahi oo weliba la jecel yahay uu isu dilayaa oo nafta isagu isu dhaafinayaa? Iyadoo qof sabool ah oo murugaysani uu nolosha ku dhegan yahay ilaa daqiiqadda ugu danabysa. Intaa waxaa dheer, qof kasta oo magac leh ama maalqabeen ahi kuma faraxsana noloshiisa.Ha ku kadsoomin waxa dadka kale leeyihiin ee sumcadda, lacagta iyo farxadda ay dadka qaarkood aaminsan yihiin. Asal ahaan, waa maxay farxaddu? iyo sidee qofku ku farxad ku heli karaa?
Maqaalkan, waxaan ku tusi doonaa sheekooyin ku saabsan dadka caanka ah iyo kuwa hodanka ah, oo loo malaynayo inay faraxsan yihiin, laakiin si naxdin leh ayay nolosha kaga bexeen iyaga oo safarkoodii caalamka ku dhamaystiray ismiidaamin ay sabab u tahay niyadjab iyo murugo aan kala go’ lahayn.
Adolf Merkel waxa uu ahaa nin Jarmal ah oo ka dhashay qoys maalqabeen ah sanadkii 1934kii , muddo dhowr sano ah waxa uu ku jiray liiska 100 ka , nin ee ugu maalqabeensan dunida. Adolf waxa uu ahaa mulkiilaha shirkadaha sameeya dawooyinka ee ugu waaweyn caalamka.
Adolf waxa uu horumariyey shirkaddii jumladda Daawada ee awowgiis Bohemian lahaa, waxaana uu noqday shirkadda iibka dawada ugu weyn Jarmalka, Phoenix Pharmahandel. Dhowr iyo toban sano waxa uu ahaa maamulaha shirkadda sibidhka HeidelbergCement iyo sidoo kale soo saaraha gaadiidka Kässbohrer. Waxa uu bartay sharciyada waxaana uu ahaa garyaqaan, laakiin waqtigiisa inta badan waxa uu ku bixin jiray maalgashiga iyo horumarinta shirkadihiisa. Waxaana uu degaanaa oo ku noolaa Blaubeuren isaga iyo xaaskiisa iyo afar carruur ah oo uu dhalay. (saddex wiil iyo hal gabadh).
Sannadkii 2007, waxa Forbes ku qiyaastay inuu haysto $ 12.8 bilyan. Sannadkii 2006, waxa uu ahaa ninka 36aad ee dunida ugu taajirsan, , laakiin waxa uu ka mid ahaa shanta nin ee ugu maalqabeensan dalka Jarmalka.
Shakhsiyaddan ninkan waxaan si fiican uga ogaan karaa waxa ay tahay farxadda iyo liibaantu.
Muddo ka dibna waxa ku dhacay khasaare maaliyadeed oo xooggan iyadoo Boqortooyadiisa maaliyadeed ay si xawli ah u burburtay, waxa uu ka baneeyay liiska uu kaga jiray boqolka nin ee dunida ugu taajirsan. Waxa lumay meeqaamkii bulshada uu lahaa, bangiyada ayaa bilaabay inay ku amraan inuu bixiyo lacagaha dulsaarka ah ee lagu leeyahay. Taasi waxa ay ku khasabtay inuu iibiyo hantidiisa ma guurtada ah. Maalmaha ayaa ku noqday kuwo dhib badan. Laakiin iyagoo arimahaasi oo dhami jiraan haddana ma ahayn sabool baahida dul hoganayso.
Adolf waxa uu ku jiray nolosha dabaqada sare, waxaana uu adkaysan waayay daymaha laga rabo iyo dhaqaalahiisa hoos u shalwanaya, sidaa awgeed waxa uu tegay isagoo lugaynaya maxdada tareenka, waxaana uu sugayay tareenku inuu soo gaadho.
Wixii intaasi ka danbeeyay waxa dhacay muuqaal naxdin badan ka dib markii uu isu dhigay tareenka oo naftiisa uu sidaasi ku dilay bishii Janaweri 5, sanadkii 2009, isagoo da’diisu tahay 74 sano, waxaana ay ahayd arrin naxdin badan leh inuu maalqabeen nolosha dabaqada sare ku jiraa uu noloshiisa ku soo xidho arrin ka argagax ku ridaysa qoyskiisa iyo saaxiibadii ay shaqada wadaagayeen.
Adolf noloshiisa isagoo murugaysan ayuu dhamaystaay , maalin danbena lama uu farxin shaqaalihiisa oo tiradoodu ahayd 100 boqol kun oo qof, xaaskiisa iyo afarta caruur ah ee uu dhalay ayaa miiska cuntada ee la fadhiisan ku murugaysnaa sida Adolf – ba isagoo niyadjabsan uu dunida u maca salaameeyay.
Dad badan oo noocan ah waxa ku dhacay dabinka farxadda beenta ah, waxa ay sameeyeen dadaal kasta oo ay ku farxayaan, laakiin ma aanay helin cid ka farxisa ama la farxad dhamaystiran. Intooda badan waxa ay keligood dhinteen oo murugaysan, waxaana ay qirteen been -abuurka sumcadda maalqabeenimada iyo dhinaceeda mugdiga ah. Sidaa awgeed waa ay niyad jabeen. Nolosha dhabta ahi maaha maalka iyo magac waa nolosha oo aad ku xidho Islaamka iyo cabsida Allah (sw), taasi ayaa noqotay badbaado xaqiiq ah, oo farxadda dhabta ahina ku jirto.
Jilaaga Mareykan, ah Mary Kay Bergman, ayaa loo arkayay mid ku faraxsan nolosheeda, mana jirin cid ogayd inay la ildaran tahay murugo joogto ah iyo werwer xad dhaaf ah, waxaana la arkay iyadoo meyd ah oo xabbad madaxa iskaga dhufatay.
Majaajiliistaha caanka ah, Robin Williams, ayaa is dilay isagoo is daldalay..Dhimishadiisa ​​ka dib, waxaa la sameeyay falanqayn iska hor imanaysa oo ku saabsan sababta uu isu dilay madaama uu ahaa maalqabeen caan? Ka dibna waxa la ogaaday in uu ninkani uu la ildaraa niyad -jab xad dhaaf ah, laakiin waligiis ma muujin niyad -jabka .. Waxa uu haystay wax kasta maal iyo magac laakiin muu haysan farxadda dhabta. Dadka badankiisu waxa ay u malaynayeen inay la xidhiidho lacag, laakiin waxa uu ahaa nin hodan oo hanti badan haysta.
Robin waxa uu awood yeeshay inuu farxad iyo qosol gaadhsiiyo guryo badan oo adduunkan ku yaal oo uu malaayiin qof wejigiisa ka qosliyo..laakiin isagu ma awoodin inuu farxad iyo qosolkaasi qalbigiisa ku rido !. Xaqiiqda nolosha iyo liibaanta runta ahi maaha maalka iyo magaca, waa Iimaanka iyo rumaynta Allah (sw), faraxdduna waa islaamnimada ku dhaqankeeda.
Rumaynta Allah (sw) iyo talo saarashadiisa ayaa kaaga filan werwerka iyo walaaca joogtada ah. Noloshu waxa ay u baahan tahay sabir laakiin haddii aanu qofku iimaan lahayn, noloshu uma dhadhamayso si kasta oo uu maal iyo magac u haysto.
Previous articleMaamulka Dawladda Hoose Ee Degmada Gebilay Oo La Wareegay Agab Ciyaareed.
Next articleFaa’iidooyinka Cafimaad Ee Geedka Timirta!